Fitaovana fanadiovana ny tontolo iainana ho an'ny solaitrabe China Manufacturer
Description:Manadio rano fisotro madio,Tadiavo,Tontolo iainana manadio
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny Birao Elektronika > Fitaovana fanadiovana ny tontolo iainana ho an&#39;ny solaitrabe
Fitaovana fanadiovana ny tontolo iainana ho an'ny solaitrabe
taratasy fanamarinana: SGS, MSDS
Ny toetra mampiavaka ny Cleanout Solutions:
1. Ny ranom-boasary rehefa vita ny fanadiovana dia azo havaozina amin'ny fisintahana, ka hampihenana izany fatiantoka , fandaniana ny fandaniana.
2.HFE Extremely ambany ambonin'ny fihenjanana sy ny viscosity, Mety tsara niely avy ka hiparitaka any ho etỳ ambonin'ny ny fototra ara-nofo sy ny masonkoditra isan-karazany, ary misy vokany eo amin'ny scour tsara, wetting, solvation sy ny fanadiovana;
3. Fitoeran'ny alàlan'ny herinaratra, ary afaka diovina amin'ny elanelana, ary afaka manatsara ny sehatr'asa;
4. Manana tady mahamay (54 ℃), ary azo ampiharina tsara amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany, ary afaka milalao anjara amin'ny fikirakirana koa mandritra ny fotoam-piraisana sy fanadiovana. tsy mampidi-doza entana , tsy jiro nirehitra ka tsy vaky, tsy misy afo na Flash hevitra;
5.Hydrofluoroether Fahasalamana tsara, mora vetaveta tsy misy miala, ary afaka mitana andraikitra tsara amin'ny fitsaboana ny fidiovana;
6. Tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza, tsy manelingelina;
7. HFE hydrofluoroether fanadiovana ny tontolo iainana mifandanja momba ny tontolo iainana, manana ODP lanjan'ny 0 sy ambany ambany GWP ambany;
Ny vahaolana amin'ny fikojakojana ny Electronic Circuit Board dia vokatra iray ahafahana mifandray amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy manimba, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
Fanadiovana Agents fiasa ara-toekarena:
Hexafluoropropyl methyl ether Solution mampiasa
Ity Liquid Cleaning ity dia fitambaran'ny Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina, sady tsy misy poizina no sady mitoka-monina. Azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny solika, ny LCD ary ny disk drive etc ., ary afaka ihany koa azo ampiasaina ho dewatering sy paharitry , elektronika singa tratra na mandefa rivotra tightness fitsapana, ary solvent.
Fitaovana fanadiovana amin'ny kitapo elektronika, fitehirizana sy fitaterana:
Ity Solosaina Elektronika ho an'ny Fanaraha-maso Elektronika ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifan-tsakafo, mora voatahiry ary
Product Categories : Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an'ny Birao Elektronika
HFE Fiarovan-tena tsara ho an'ny birao elektronika Contact Now
tsy misy poizina sy tsy manimba ny siramamy Contact Now
HFE Hydrofluoroether vinaingitra ny ordinatera elektronika Contact Now
Fitaovana fanadiovana ny tontolo iainana ho an'ny solaitrabe Contact Now
Hexafluoropropyl methyl ether fanadiovana ho an'ny solaitrabe Contact Now
Fanadiovana fanadiovana ny tontolo iainana ho an'ny solaitrabe Contact Now
HFE nadio ho an'ny ordinatera elektronika Contact Now
Ny tsiranoka ambany amin'ny tetezana ambany amin'ny bateria Contact Now
Manadio rano fisotro madio Tadiavo Tontolo iainana manadio